Lithela izithelo ipulazi aliphethe
UNKSZ Nonhlanhla Gumede ongumqondisi weThandimvelo Farm eseGingindlovu okwaze ukukhulisa izinga lokukhiqiza kuleli pulazi lo mndeni ISITHOMBE: SITHUNYELWE
LITHELA izithelo ipulazi eliphethwe ngowesifazane owashiya umsebenzi wakhe ukuze alekelele umndeni wakhe onepulazi elase lehlelwe umkhiqizo.
UNksz Nonhlanhla Gumede ongumqondisi weThandimvelo Farm, eseGingindlovu washiya umsebenzi wakhe ngo-2011 ngesikhathi ebona ipulazi lo mndeni wakhe liwa ngoba lingasawukhiqizi umoba elaliwukhiqiza phambilini.
UNksz Gumede uthe wenza izifundo zokuphathwa kwezimali esebenza esikhungweni sezezimali.
“Ngazwela ngesikhathi ubaba engifonela, engazisa ukuthi ipulazi lakhe ayeqale ukusebenza kulo esengumsebenzi liyawa ngoba selehlelwe umkhiqizo wacela ukuthi ngize ngizolekeleka. Ngashiya phansi umsebenzi wami, ngeza epulazini ngizolekelela ubaba,” kusho uNksz Gumede.
Uyise, uMnuz Mahlakaniphana Gumede, uthe waqala ukusebenza kuleli pulazi ngeminyaka yama-80s ngaphambi kokuthi izingane zakhe zizalwe.
Waqala engumsizi wakhona epulazini wakhula ngezigaba zakhona waze wafinyelela esigabeni sokuthi abe yimenenja yepulazi ngaleso sikhathi okwakungelikaMnuz Jasper Pons, iPons Farming.
Ngo-2003 abakwaTongaat Hullet bavulela abantu abamnyama ithuba lokuthi bathenge amapulazi abo ngaphansi kohlelo lukahulumeni olwaluhlelelwe ukuhlomulisa ababencishwe amathuba okuthi babe ngabanikazi bomhlaba phambilini, iLand Redistribution for Agricultural Development (LRAD).
UGumede wasizwa umqashi wakhe uPons ukuthi agcwalise amaphepha ayedingeka ukuze angene kulolu hlelo, isicelo sakhe saphumelela.
Yaqala kanjalo iM Gumede and Family cc Project, eyaziwa ngeThandimvelo. Ngesikhathi kuqalwa bekulinywa amahektha angu-100, umkhiqizo wenyuka kuleli pulazi laze lakhiqiza amathani kamoba angu-5 500.
Ngo-2010, kwaqala izinkinga ipulazi lehlelwa umkhiqizo ngenxa yokuhlasela kwesomiso KwaZulu-Natal.
Kuthe emuva kwalokho uNksz Gumede wathatha isinqumo sokuthi ashiye umsebenzi abesabheke ukukhula kuwo, wazolekelela uyise.
Ukufika kwakhe akusheshanga ukuthela izithelo ezinhle, ipulazi liqhubekile nokungasimami ngendlela abefisa ngayo.
“Ngifike ngafuna usizo ezikhungweni eziningi ezisiza abalimi bamoba ukuze sikwazi ukutshala kuwo wonke umhlaba obekutshalwa kuwo phambilini.
“Sithole usizo kwiSouth African Sugar Research Institute, sathola nezikhungo ezisiboleke imali esiyikhokhe yonke nyakenye,” kusho uNksz Gumede.
Phakathi kwabatshali-mali ababasizile uthe bathole imali kwiMintriho Foundation.
“Imali abasiboleke yona yenze ukuthi isivuno salo nyaka sikhule, sikhiqize amathani angu-3 500 kamoba. Ngo-2020 sizokhiqiza amathani angu-6 000.
“Akubanga lula ukwenyusa umkhiqizo, siphoqeleke ukuthi izinsiza kusebenza siziqashe kubantu ngoba besingenayo imali yokuthi sizithengele ezethu. Abaqashisayo bayayibizisa imishini, besizithola sesikhokha imali ephindiwe,” kusho uNksz Gumede.
Nyakenye leli pulazi lo mndeni litshale amahektha angu-70 kwangu-112 okungatshaleka kuwo.
“Yize ngibonile ukuthi umsebenzi wasepulazini awulula futhi kunzima ukuthola imali ngisafisa ukuthi ngelinye ilanga ngithenge elinye ipulazi ngoba kuzobe sekulula ukulikhokhela uma leli selisebenza kahle,” kuphetha uNksz Gumede